‘कोराना संक्रमणमुक्त भएकासंग दोस्ती कायम गरौं’ : RajdhaniDaily.com -
Home Exclusive ‘कोराना संक्रमणमुक्त भएकासंग दोस्ती कायम गरौं’
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणमुक्त भएकाहरुलाई अपमान होईन सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । संक्रमणमुक्त भएकालाई अंकमाल गर्दा केहि फरक नपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले संक्रमितहरुलाई हेला गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘कोरोना भाइरस लागेको व्यक्तिलाई हेप्नुहुँदैन । अनादर गर्नुहुँदैन, हामी पनि त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छौं । कोरोना लाग्नु भनेको ठुलो अपराध जस्तै मानिएको छ, त्यसो होईन ।’
राजधानी राउण्ड टेवल
उनले संक्रमण दिनप्रतिदीन फैलिरहेको भन्दै यो बेला भेला, जमघट लगायतका कृयाकलाप गर्नु आत्मघाती रहेको बताए । उनले भने,‘अधिकांश जिल्लाहरुमा छिटपुट छ । केहि जिल्लामा खास खास ग्रुप (स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, बैंकका कर्मचारी) मा कोरोना देखिएको छ । क्लस्टर क्लस्टरमा संक्रमण देखिएको छ ।’ क्लस्टरमा नियन्त्रण गर्न नसकिए संक्रमण समुदायमा फैलिन सक्ने बताए । उनले टेष्टिङको दायरा फराकिलो बनाएको भन्दै जोखिमयुक्त स्थानहरुमा परीक्षण भइरहेको बताए ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.रवीन्द्र पाण्डेले संक्रमणमुक्त भएको व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कुनैपनि व्यक्ति संक्रमणमुक्त भएको छ भने सो व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना सर्दैन । यदी हामी संक्रमित भयौं भने उसको प्लाज्मा हामीलाई काम लाग्न सक्छ । संक्रमितलाई माया गर्नुपर्छ । सम्वन्ध कायम गर्नुपर्छ । खोजि खोजि अंकमाल गर्नुपर्छ ।’
कोरोना भाइरस संक्रमण भएको व्यक्तिलाई हेप्नुहुँदैन । अनादर गर्नुहुँदैन, हामीपनि त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छौं । कोरोना लाग्नु भनेको ठुलो अपराध जस्तै मानिएको छ, त्यसो होईन : प्रा.डा.जागेश्वर गौतम, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
संक्रमित पहिचान गर्न कोरोना परिक्षणलाई व्यापक बनाउनुपर्ने वताए । उनले भने, ‘जोखिम भएकाहरु (सुकुम्वासी बस्ती, तरकारी बजार, डिपार्टमेन्ट स्टोर, मासुपसल, मजदुर लगायत) लाई खोजेर धेरै भन्दा धेरै परीक्षण गर्नुपर्छ । यस्तै, धेरै भन्दा धेरैको कन्टयाक्ट ट्रेसिङ गर्न आवश्यक छ ।’
महामारीको समयमा कोरोना परीक्षण गर्दा निशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘परीक्षणका नाममा शुल्कमा एकरुपता छैन । यदि निजी ल्यावलाई परीक्षण गर्न दिने हो भने शुल्क घटाउनुपर्छ ।’
हाल देशभर सकृय संक्रमितको १४ हजार दुई सय ५० पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार आठ सय ५५ जना संक्रमित थपिएका छन् । हाल १० हजार चार सय ५३ जना क्वारेन्टाईनमा बसेका छन् ।
कुनैपनि व्यक्ति संक्रमणमुक्त भएको छ भने सो व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना सर्दैन । यदी हामी संक्रमित भयौं भने उसको प्लाज्मा हामिलाई काम लाग्न सक्छ । संक्रमितलाई माया गर्नुपर्छ । सम्वन्ध कायम गर्नुपर्छ । खोजि खोजि दोस्ती गर्नुपर्छ : डा. रवीन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्य विज्ञ
संक्रमित मध्ये हालसम्म एक सय ६४ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो केहि दिनयता लक्षण सहितका संक्रमितहरु देखिन थालेका छन् । लक्षणसहितका संक्रमितको संख्या बढेसँगै आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार देशभर एक सय ६३ जना कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार १३ जना भेन्टिलेटरमा र एक सय ५० जना संक्रमित आइसियुमा उपचाररत रहेका छन् । आइसियुमा रहेका संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ६० जना र १३ जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् ।
जनकपुरधाम । जनकपुरधामको महाबीर चोकमा प्रहरी र व्यापारीबीच विवाद भएको छ । व्यापारीहरुले प्रहरी माथि दूव्र्यवहार गर्नुका साथै प्रहरीको मोबाइल समेत फोडिदिएका छन्...
हलेसी मन्दिर पुनः १५ दिन बन्द हुने
Editor-Picks सुर्य तामाङ - April 27, 2021 0
खोटाङ । बैशाख १३, खोटाङको त्रि–धार्मिकस्थल हलेसीलाई १५ दिन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । कोभिड–१९ को दोश्रो लहरको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला कोभिड–१९...
प्रदेश २ Kumar Raut - February 26, 2020 0
Breaking News Roshan Shrestha - April 26, 2020 0
नेप्से ६९.५६ अंकले बढ्यो, साढे तीन अर्वको कारोबार
अर्थ Dhruba Lamsal - February 23, 2020 0
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ६९.५६ अंकले बढेर १५०४. १४ मा पुगेको...
Breaking News Kumar Raut - June 27, 2020 0